Ku guuleysto Online kasta oo leh shey kasta, adeeg, hiwaayad, ganacsi, urur ama xitaa si kor loogu qaado lacag ee sadaqadaada ama bulshadaada!
Ka dib markii dadku ku siiyaan cinwaanka emailkooda waxaad u baahan tahay inaad hesho nidaam si aad u gudbiso emaylka oo dhisto xiriir, u xusuusin inay qaadaan talaabo iyo waxyaabo dheeraad ah.
Waxaad iibin kartaa badeecadahaaga ama dadka kale, kaliya hubi in ay ku habboon yihiin mawduucaaga nikahada ah iyo adiguba aad qaali u tahay inaad ku bilowdaan.
7) Ururi lacag online
Bilow adigoo furaya oo isticmaalaya koontada PayPal si aad u iibsato waxna u uruuriso lacag & Isticmaal goobaha wax soo saarka ee ururiya lacag aad loogu talagalay.
8) Suuq-geyn lacag la'aan ah
9) Domain Setup, martigelinta & bogga
9 Tallaabooyinka loo maro ONLINE! WAXYAABAHA LAGU HESHO SIXXADDA XAGGA - daawo hadda